अब कांग्रेस कि सुध्रिन्छ कि सिद्धिन्छ, विकल्प छैन
२५ मंसिर २०७४, सोमबार ०९:४७
निर्वाचनको मतपरिणाम हेर्दा चमत्कार जस्तो लागिरहेको छ। पहिला दुई वटा कम्युनिष्ट भनिने यी पार्टी कुकुर-बिरालाझैं लड्थे। अघिल्लो दिनसम्म एकले अर्काको अनुहारमै थुकेर अनुहार नै विरुप बनाएका थिए। हठात् पत्याउनै नसक्नेगरी कुन ग्रहको के चमत्कार भयो, तिनिहरुबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो। चुनावी गठबन्धनलाई पार्टी.....
स्थायी सरकार र समान राजनितिक आचरण बोकेकाको मेलमिलापले अग्रता लिएको हो ।
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार २१:४८
सायद यो निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामलाई लिएर बिश्लेण गर्ने समय होईन । सायद यति हतार गर्नु हुदैनन्थ्यो तर केही कुरा हुनुभन्दा पहिलेनै बोल्नु राम्रो हो । १. यो "बामपंथी" वा "कम्न्युष्ट"ले जितेको वा अग्रता वा जित्दै गरेको भनिदैछ, त्यो सरासर गलत हो । सत्य के हो भने "स्थायी" सरकार "बिकास"को मुद्दा र समान राजनितिक.....
कहाँनेर चुक्यो काँग्रेस ? एक रिपोर्ट
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार १७:४८
मतदान मार्फत जनताको व्यक्त अभिव्यक्ति सह्रानीय छ । लोकतन्त्रमा हारजितको खेल चलिरहन्छ ।यस मानेमा कुनैपनि राजनीतिक दलले हारेकोमा दुख मानिहाल्नु आवश्यक छैन भने जित्ने पार्टीले यो नै अन्तिम चुनाव हो भनेर मात्तिनु पनि आवश्यक छैन । देशमा बनेको संविधान र त्यसको कार्यान्वयनका लागी नेपालका प्रमुख पार्टीको.....
गरिबको घाउमा मल्हम पट्टि लगाउदै हिड्ने रवी लामिछाने को हुन् ?
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०९:५९
जब जन्मन्छ एउटा सकारात्मक सम्भावना तव बिभिन्न तरिकाले फायर खुल्छन् भ्रष्टाचारीको फायर ! दलालहरुको फायर !! अरुलाई दुर्वल बनाउन बिभिन्न प्रपन्चका फायर !!! जसले यो देश चपाउन पल्किएको छ र लुट्न पल्किएको छ ! तिनैका फायर ! साच्चै पत्रकार रवि लामिछानेको चर्चासँगै उनि माथि बिभिन्न खाले फायरहरु खुल्दै जान थालेका.....
रविन्द्र मिश्रको यौन आतंक देखि राजाको चाकडी, किशोर नेपाल ले प्रमाण पेश गरे !
२० मंसिर २०७४, बुधबार १४:५५
-कान्तिपुर गाथा- चुनाव प्रचार अभियान बन्द भएर मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा केही घण्टा पहिले कनिका थिइ सुदिप्तीको कोठामा। सुदिप्ती उसको रिपोर्टिङको छानविन गर्दै थिइ। कनिकामाथि हजारौ आरोप थिए। उसमाथिको सबभन्दा ठूलो आरोप थियो खरो लोकतन्त्रवादी थिइ उ। अफिसमा आएका आरोपहरुबाट पनि यही कुराको पुष्टि हुन्थ्यो। चुनावको.....
१८ मंसिर २०७४, सोमबार १७:२८
केही दिनअघि पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्र बुटवलको एक सामाजिक जमघटमा विदेश जाने युवाहरूको लर्कोबारे कुरा उठ्यो । त्यहाँ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, कोरिया, चीन, जापान र युरोप पठाउने परामर्शदाताका नाममा ठूलो संख्याका व्यक्ति/संस्था सक्रिय रहेछन् । धेरैजसो भर्खर उच्च माध्यमिक तह सकेका, स्नातक र केही.....
किन गर्छन आत्महत्या,रोकथामका उपायहरु
१८ मंसिर २०७४, सोमबार १६:३१
हिजोआज आत्महत्या गर्नेहरुको समाचार आउने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष एसएलसी परीक्षाको रिजल्टपछि आत्महत्या गर्नेहरुको समाचार बन्ने गर्दछ । मानिसले किन गर्दछ आत्महत्या ? यो खोजको विषय बनेको छ । मनोविज्ञहरुको भनाइअनुसार जीवनमा आत्महत्या गर्ने सोच धेरैले गरेका हुन्छन् । किन बढ्दैछ आत्महत्या ? विद्यालयमा पढ्ने.....
किन हेप्छ भारतले नेपाललाई ?पढ्नुस एक पठनयोग्य लेख
१६ मंसिर २०७४, शनिबार २०:०२
किन हेप्छ भारतले नेपाललाई ? यो ज्यादै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न देश हो भनिएको छ । तर भारतले नेपाललाई बारम्बार हेप्दै आएको छ । थिचोमिचो गर्दै आएको छ । सिमानामा भारतले करीब ७२ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । भनिन्छ करिब ६० हजार हेक्टर नेपालको जमीन भारतले हड्पेको.....
सडक दुर्घटनाका चार कारण
१३ मंसिर २०७४, बुधबार ०७:१७
चाडपर्व होस् या अरु कुनै समय दुर्घटना बढ्नुका मुख्य चार कारण छन्। साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा वर्षेनी सडक दुर्घटना बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। यस समयमा वर्षाका कारण सडक हिलो र चिप्लो हुनु, चालक चाडपर्वको मुडमा हुनु, चालकले आराम नपाउनु र क्षमताभन्दा बढी यात्रु दुर्घटनाका मुख्य चार कारण हुन्। सडक दुर्घटनामा.....
शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद
१२ मंसिर २०७४, मंगलवार १३:२०
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार भएको पहिलो चरणको निर्वाचन अत्याधिक शान्तिपूर्ण र उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न भयो। संविधानको कार्यान्यवयन र मुलुकले भोग्दै आएको दुई दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यका लागि संविधान अनुसार आज सुरू भएको निर्वाचन एउटा महत्वपूर्ण जंघार हो। निर्वाचन.....